Beeraleyda gobolka Bari oo u doodaya iney helaan Mashaariic waxtar u leh Beerahooda[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Beeraleyda gobolka Bari oo u doodaya iney helaan Mashaariic waxtar u leh Beerahooda[Sawirro]
Magaaladda Boosaaso kulan ay maanta ku qaateen Qaar kamid ah Beeraleyda gobolka Bari iyo Wasaarada Beeraha iyo Waraabka Puntland ayaa looga hadlay in la helo qaab lagu horumarin karo wax soo saarka delaga beeraha.
Madasha shirka oo ay ka qeybgaleen qaar kamid ah Beeraleyda gobolka Bari iyo mas’uuliyiin Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Puntland ka socday ayaa la isla qaatay in laga shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa Beeraha gobolka.
Xubno kamid ah Beeraleyda ku dhaqan gobolka Bari ayaa soo Jeediyey in la musuqmaasuqo mashaariicda loogu talagalo Beeraleyda ayna doonayaan in ay wax ka qabato arrimahan Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Puntland.
Axmed Maxamed Muumin
Guddoomiyaha ahna Guddoomiye kuxigeenka Iskaashatada Beeralyda Soomaaliyeed Axmed Maxamed Muumin ayaa soo jeediyey in laga doonayo hay’adaha bixiya mashaariicda loogu talagalay Beeralayda la yimaadaan agab waxtar u leh Beeraleyda gobolka Bari.
Mudane Axmed Maxamed Muumin ayaa sheegay in agabka ay u baahanyihiin Beeraleydu tahay in lagala tashto Guddiga beeraleyda gobolka Bari balse aan la iska keeniin qalab aysan u baahneyn.
Carab Sahal Xirsi oo ah Madaxa Fulinta Wasaarada Beeraha iyo Waraabka Puntland ee gobolka Bari ayaa sheegay iney ku dadaalayaan in wax laga qabto Cabashada Beeraleyda ku dhaqan gobolka.
Isuduwaha Wasaarada Beeraha iyo Waraabka gobolka BariMaxamuud Cabdalla Waaberi ayaa ku dheeraaday hawlaha ay qabatay Wasaaradu markii ay timid Dawladda Puntland ,isagoona ballanqaaday in wax badan qaban doonaan.